INuru Studio • Umzimba Wokugcotshwa kanye ne-NuRu Massage
Hlikihla umzimba Izandla Ezine UNuru Slide Okwelapha
UJulia uyintokazi ephakeme futhi efundile ehlinzeka ukubhucungwa komzimba eManhattan. Uhlala njalo ebheke phambili ekutholeni ulwazi olusha nokwenza abangane. Ngemvelo ebukekayo, enobungane nentshisekelo yobuningi, isikhathi esichithwa naye luhambo lomlingo lwenjabulo emsulwa.
UJulia uyi-34C yemvelo. Ungu-5'7, kepha mude kancane kuma-stilettos agqoka njalo. Unomzimba ogobekile, imilenze emincane, kanye nesinqe esihle esiyindilinga. Ushileke futhi unomzimba omangalisayo we-hourglass.
Mhlawumbe ungamethemba ngensingo bese uthola i-trim eyingqayizivele "phansi"? Noma yini oyikhethayo, kuzoba mnandi! Ngeminye imininingwane, sicela, ushayele.
Ukuthinta inkanuko kukaJulia, i-aromatherapy, kanye i-bodyrub eNew York yiyo yonke into oyidingayo ukuze uzizwe ujabule. Unekhono kakhulu kubuciko be-tantra ngakho-ke vele ubeke phansi uzwe amagagasi enjabulo emsulwa ethatha umzimba nengqondo yakho.
NgoLwesibili: 10:30 AM - 3:00 AM
ngoLwesithathu: 10:30 AM - 3:00 AM
ULwesine: 10:30 AM - 3:00 AM
NgoMgqibelo: 10:30 AM - 3:00 AM
NgeSonto: 10:30 AM - 3:00 AM